शिक्षा र स्वास्थ्य – Yuwa Aawaj
May162021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौ : दैनिक ६ घण्टा भन्दा कम सुत्ने मानिसलाई ह्द’यघात , सुर पेसर हुने एक अध्यनले बताएको छ । आजकाल मानिसहरु धैरै व्यस्त हुने भएकाले आफ्नो खानपानमा व्यवस्ता गर्छन् । सुत्ने, खाने र आराम गर्ने लगायतका कुराहरुमा अहिले धेरैले ख्याल गर्दैनन् । एक अध्ययनले राति ६ घन्टाभन्दा थोरै निदाउने व्यक्तिको मृ’त्यु मु'टुको रोबग, हृ’दयघा’तको ख'त्तरा दुइ गुणा धेरै हुने भन्दै ज्या'न जाने ख'त्तरा पनि त्यस्तै भएको जानकारी दिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डि'योथोरासिक भास्कु'लर ट्रान्स'प्लान्ट सेन्टरका मु'टुरोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोईराला पनि अनिन्द्रा मुटु रोगको प्रमुख कारण रहेको मान्छन् । केही बंशा'नुगत रहेपनि विका\_शोन्मुख देशहरुमा खानपान र बेचैन नै मुटु रोगको प्रमुख कारण हो । खानेकुरा ब्याले'न्समा खान नसक्नु । उनका अनुसार कसरतको समय नपाउँनु र चैनका साथ सुत्न नसक्नु नै प्रमु
May92021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौ : यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन । ज्वरो आउने, खो'की लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखा'ला वा र बान्ता हुने, एकदम थ'कान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बि'मिरा आउने, आँखा रातो हुनेमध्ये केहि ल'क्षण मिलेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । यसपटक परिवारमा एकजना सं'क्रमित भएमा सबै संक्र'मित हुने अवस्था छ । तसर्थ कुनै लक्षण देखिएमा आइ'सोलेसनमा बस्नुहोला । संक्रमणको शंका लागेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । सहेर वा हेरौं भनेर अलमल नगर्नुहोला । जति छिटो रोग पत्ता लाग्यो, त्यति छिटो उपचार पाउने अवस्था हुन्छ । – पिसिआर पो'जिटिभ आएमा गतसाल जस्तो सप्लिमेन्ट ( भिटामिन वा इम्युन बुस्टर ) खाएर ढुक्क नहुनुहोला । यसपटक छिटो को'भिड निमोनिया हुने भएकोले तुरुन्तै नजिकको को'भिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जानुहोला । त्यहाँ चिकित्सकले तपाइंलाई प'रीक्षण
Apr112021 by Yuwa AawajNo Comments
नेपालमा १२०० मिटर सम्मको उचाइमा पाइने असुरो वनमा पाइने ज'डिबुटी हो । आयु'र्वेदमा यसको महत्वको विषयमा विशेष च'र्चा हुन्छ । यो औष'धीय गुण भएको बु'ट्यान वर्गमा पर्ने वन'स्पति हो। विभिन्न औ'षधीय गुण हुने असुरको प्रयोग गर्दा रोगीको क्षमता र मात्राको संयोजन नमिलेमा हानि'कारक पनि हुन सक्छ । अ'सुरोको बोट बन/जंगल, धाराको छेउछाउ साथै खुल्ला ठाउँहरुमा पाइन्छ । असुरोको बुटा प्रायः १ मिटर भन्दा अग्लो हुन्छ र बढीमा २.५ मिटर सम्म अग्लो हुन्छ। यसको पातको लम्बाई २० सेन्टि'मिटर र चौडाई ७.५ से.मीसम्म हुन्छ ।पातको कि'नारा धा'रिलो हुन्छ। फूलहरू एउटै डाँठमा गु'च्चमुच्च हुन्छन् । फूलको रंग सेतोमा प्याजी नसाका धर्का देखिन्छ । वन औष'धिको नामले पनि असुरो'लाई चिनिन्छ । एकपटक उ'म्रिसकेपछि प्राय नाश नहुने असुरो खेतवारी एवं का'न्लाहरुमा पनि प्रशस्तै पाइन्छ । श्वा'समार्गमा जमेर रहेको कफलाई यसले सजिलै बाहिर न
Apr62021 by Yuwa AawajNo Comments
Posted in Health, शिक्षा र स्वास्थ्य
काठमाडौ : आजको समयमा न्यून रक्तचापको समस्या सामान्य जस्तै भएको छ। व्यस्त जीवनशैली र गलत खान-पिनको कारण यो स'मस्याबाट धेरै मानिस पि'डित छन्। च'क्कर आउने, बेहोश हुनु, थकान, सास फेर्न गाह्रो सबै न्यून रक्तचाप रोगका ल'क्षणहरू हुन्। यद्यपि मानिसहरू उच्च रक्त'चाप सबैभन्दा ख'तरनाक हो भन्ने सोच्दछन्, तर न्यून रक्तचाप समान पनि खतर'नाक हुन्छ। रगतको प्र'वाह शरीरमा राम्रोसँग गर्न हुँदैन जसको कारण न्यून रक्त'चापको समस्या हुन्छ। यो समस्या दूर गर्नको लागि केहि चीजहरू न्यून रक्त'चाप बिरा'मीहरूले आफ्नो आ'हारमा समावेश गर्नुपर्छ। किसमिस भिटामिन र एन्टिअ'क्सीडेन्टहरू किसमिसमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ र यसले शरीरमा रगत प्र'वाह गर्न मद्दत गर्छ। किसमिस न्यून रक्तचाप बि'रामीहरूले आफ्नो खानामा समावेश गर्नु निकै फा'इदाजनक हुन्छ। नून शरीरमा न्यून र'क्तचाप बढाउन नूनको सेवन गर्नु पर्छ। शरीरमा कम
Apr22021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौँ । तपाईंले सुन्दर र सुन्दर पारिजात फूलहरू लगाएको अवश्य देखेको हुनुपर्छ। तर, के तपाईंले कहिल्यै पारिजात उर्फ हर्सिंगारको पातबाट बनेको चिया पियाउनुभएको छ वा स्वास्थ्य र सौन्दर्य उपचारको लागि यसको फूल, बीउ वा बोक्राको प्रयोग गर्नुभएको छ ? यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, त्यसोभए तपाईंले यसको चमत्कारी औषधीय गुणहरूको बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक छ। पारिजातका फूलहरूबाट पात, बोक्रा र बीउहरू पनि उपयोगी छन्। यसको चिया स्वादमा उत्कृष्ट मात्र होइन स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा पनि धनी छ। तपाईं यस चियालाई बिभिन्न तरीकाले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंले स्वास्थ्य र सुन्दरताको धेरै फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा र विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि चिया बनाउने तरिकाहरू जान्नुहोस्ः जोर्नीको दुखाइः पारिजातको पातहरू पिंधेर तिनीहरूको पिसाई पछि, यो पेस्टलाई पानीमा राख्नुहोस् र मात्रा आधा नघटाएसम्म उमालेर।
दादलाई निर्मुल पार्ने यो चमत्कारिक घरेलु औषधी, जानीराखौँ ।
काठमाडौ : शरीरको विभिन्न भागमा जस्तै घाँटी, गर्दन, हात, पाखुरा वा अन्य भागमा आउने दाद एक जटिल समस्या हो।दाद जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा पनि देखिने समस्या हो। दादबाट छुटकारा पाउनको लागि जत्ति औषधी उपचार गरे पनि यो बारम्बार बल्झिरहने हुन्छ। दादको औषधी उपचार गर्न धेरै पैसाका साथ समय पनि खर्च हुन्छ तर यो पूर्ण रुपमा भने निको नहुने र बारबार बल्झिने समस्याले सताईरहेको हुन्छ । आज हामी यस्तो अचुक घरेलु उपचार विधिको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ, जसले पुरानो भन्दा पुरानो वा जिद्धी दादलाई सधैँका लागि हटाउन मद्धत गर्दछ । १. यसका लागि चाहिने सामग्री: तिते करेला, नरिवलको तेल र कपुर।२. बनाउने विधि: सुरुमा एउटा वा आधा तीते करेलालाई सानो सानो टुक्रामा काटी यसलाई पिसेर पेस्ट बनाउने।अब एउटा सफा कचौरामा एक चम्चा नरिवलको तेल र एक दाना कपुरलाई पाउडर बनाएर मिसाउने। कपुर (पूजा गर्न प्रयोग गरिने) नरम हुन
Apr12021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौ : स्वास्थ्य कायम राख्नका लागि तिलको ठूलो महत्व छ । तिलमा पाइने पु'ष्टिकारक तत्वले शरीरलाई चु'स्तदुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ ।तिलमा पाइने लेसि'थिन दिमाग र आँखाका लागि लाभदायक हुन् तिलमा पाइने सेसामोल नामक तत्वले डिएनएलाई परावैजनी किरणजन्य हानिबाट जोगाउँछ ।तिलका गेडामा फाइबर हुन्छन् जसले स्वस्थ पाचन प्र'णाली बनाउनका लागि मद्दत गर्छन् । तिलको नियमित सेवनले क'ब्जियत हुन दिँदैन । तिलका गेडामा पाइने म्याग्ने'सियमले श्वासप्र'श्वासमा हुने ऐंठन हटाएर दम लगायतका रोग लाग्न दिँदैन ।तिलका गेडामा पाइने तामाले बाथजन्य पी'डा घटाउँछ । यसले रक्त'कोषिका, हड्डी र जो'र्नीहरूलाई बलियो बनाउँछ । यो पनि :हाडजो'र्नीमा समस्या छ ? खानामा समावेश गर्नुहोस् यी चिजहरू !!:जाडो मौसममा प्रायः मानिसहरूलाई हाडजो'र्नी धेरै दुख्छ । हाडजोर्नीको समस्याले तपाईँको दैनिक काममा बाधा पु¥र्याउनाले जीवनशैलीमा नै प्र'भाव पा
Mar272021 by Yuwa AawajNo Comments
मुटु स्वस्थ राख्न गर्नै पर्ने यी ५ कामहरु ।
मुटु शरीरको यस्तो अंग हो जसलाई स्वस्थ राख्न नसक्दा मानीसले कतिबेला आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनपुग्छ थाहा नै हुँदैन । बाहिर स्फूर्त देखिने व्यक्ति पनि मुटु अस्वस्थय भएकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन्। जसरी शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानपिनको आवश्यकता हुन्छ, त्यसरी नै शारीरिक व्यायामको पनि आवश्यकता पर्छ । दिनभरमा यस्ता शारीरिक व्यायाम तथा गतिविधि जरुर गर्नु पर्छ जो तपाईंको शरीरलाई आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता काममा योगा, जीम, खेलकूद, नृत्य या घरको काम काज पनि हुन सक्छन् । यस्ता काम गर्दा तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यका साथै मुटुलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ। आज हामी तपाईंलाई एकदमै सजिला कामबारे बताउँदै छौं जसबाट तपाईंले आफ्नो मुटु र शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ । भर्याङ (सिढी) चढ्नु तपाईंको घरमा होस् या कार्यालयमा भर्याङ (सिढी) त पक्कै पनि होला । यदि तपाईंले दिनमा १० मिनेट मात्रै लगातार सिढी चढ्ने र
Mar232021 by Yuwa AawajNo Comments
यी हुन टमाटर खानुका अचम्मैको १० फाइदाहरु ।
काठमाडौ : तरकारीलाई स्वादिलो बनाउनका लागि गोलभेडाको प्रयोग आजभोली अनिवार्य जस्तै भएको छ । सूपको रुपमा, अचारको रुपमा तथा श्रृंगारको सामानको रुपमा समेत गोलभेडाको प्रयोग हुने गरेको छ । टमाटरबाट भिटामिन सी, लाइकोपीन, भिटामिन, पोटाशियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । साथै यसको प्रयोगले कोले'स्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । १. मानिसलाई वजन घटाउन पनि गोलभेडा फाइदाजनक छ । तर टमाटरको सवैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको पकाउँदा पनि त्यसको पोषक तत्व जादैन । २. टमाटरको प्रयोगले कयौं रोगको रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ । ३. विहान पानी नपिइकन पाकेको टमाटर खादा स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदा पुग्छ । ४. यदी बच्चालाई सुख्खा रोग भएको खण्डमा प्रत्येक दिन एक गिलास टमाटरको जूस पिलाउदा बिरामीबाट आराम मिल्छ । ५. बच्चाको मानसकि तथा शारीरिक विकासका लागि टमाटर बहुत फाइदाजनक हुन्छ । ६. मोटोपन घटाउनका लागि प
Mar212021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौँ : नसर्ने रोगको सूचीमा प्रमुख रुपमा आउँछ म'धुमेह रोग । सामान्य साव'धानी अपनाउनसके निय'न्त्रण गर्न सकिने यो रोग खानपान र जीवनशैलीका कारण बढी देखिने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सके यो रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कसरी गर्ने व्यवस्थित ? १.चिनी र चिनीबाट बनेका परिकार नखाने । २. धूम'पान, सू'र्तिजन्य पदार्थ मद्यपान जस्तैः रक्सी, चू'रोट, खै'नी, बिडी आदि से'वन नगर्ने । ३. नून र चिल्ला कम खाने । ४. खानासंगै सलाद, हरियो सागसब्जी प्र'शस्त मात्रामा खाने । ५. गहुँ, मकै, कोदो, फापरबाट बनेका परिकार खाने । ६.शारिरीक व्यायामः दैनिक १ घण्टा हिंड्ने, खेतबारीमा हल्का काम गर्ने, सामान्य खेलकूदमा सहभागी हुने । ७. योगासन, ध्यान, प्राणा'याम गर्ने । ८. लामो समय सम्म भो'कै नबस्ने । बिहान उठ्ने वित्तिकै बेसार पानी पिउनुहोस्, रोक्छ मधु'मेहको ख’तरा ! प्रायजसो व्य’क्तिले बिहान उठ्ने वित्तिक